I-Luxury De Waterkant Loft Retreat
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Anna & Bertus
U-Anna & Bertus uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Le loft ethulwe kahle ibekwe e-De Waterkant, enye yezindawo ezihamba phambili eKapa. I-floorplan ye-Loft ihlanganisa igumbi lokulala elikhulu, igumbi lokugezela le-en-suite likanokusho, izimpumputhe ezizenzakalelayo, indawo yokusebenzela, ikhishi lesimanje nendawo yokuhlala enethezekile & yokudlela. Ibekwe endaweni eyaziwa ngomuzwa wayo ofudumele womphakathi, futhi ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ezitolo, ezindaweni zokudlela nezokuthutha, i-De Waterkant Loft Retreat yethu ihlinzeka ngazo zonke izici zokuphila ukuphumula, ukunethezeka nokunethezeka kalula.
I-loft itholakala esitezi sesi-3 sesakhiwo esisha - esilungele izivakashi noma ochwepheshe abasebenza. Ifakwe ngokuphelele ngamafasitela acwebezeliswe kabili futhi yakhiwe ngezitezi ezimbili: Ukungena, izivakashi ezisezingeni eliphansi zamukelwa indawo yokudlela evulekile eklanywe ngohlelo oluvulekile, ikhishi elisebenza ngokugcwele elinesitofu, uhhavini, umshini wokuwasha izitsha, ubhontshisi- umshini wokugcwalisa inkomishi wekhofi kanye ne-microwave. Ukuhamba ngokushesha ukhuphuka ngezitebhisi kuveza ikamelo lokulala elihlotshisiwe elinendlu yokugezela ye-en-suite, indawo yokusebenza, ithelevishini yesibili kanye nokubukwa kwedolobha okungu-180 degree.
I-HDTV engu-49" ene- I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.92 ·75 okushiwo abanye
Yakhiwa ngekhulu le-19, i-De Waterkant ngesitayela sayo sokwakha, iyingxube ye-Cape Dutch kanye nesiGeorgia, okuwumphumela wamagugu ahlukahlukene ale ndawo.
Le ndawo iyindawo ethokozisayo yabathengi basemgwaqweni, egcwele izitolo zekhofi kanye namafemu okuklama kwangaphakathi. IDe Waterkant eyaziwa kakhulu ngokuthi “isifunda esipinki” esinenqwaba yamabhawa kanye nezindawo zokudlela, i-De Waterkant yaziwa emhlabeni wonke ngesimo sayo somqondo ovulekile. Kuphinde kube yizulu le-foodie.
Kusukela ku-Greek and Turkish kuya ku-French kanye ne-Italian cuisine, le ndawo inikeza ukunambitheka okuvela emhlabeni wonke futhi abantu bendawo bajabulela ukudla ezindaweni zokudlela ezidumile zendawo, konke okuhamba ngebanga lokuhamba komunye nomunye.
Izindawo ezidumile ezinabantu bendawo nezivakashi zifaka i-Anatoli ne-Il Leone.
Ibungazwe ngu-Anna & Bertus
Ithimba lethu liku-stand-by 24/7 ukusiza.
UAnna & Bertus Ungumbungazi ovelele